အခမဲ့ရုပ်ရှင် streaming ဝက်ဘ်ဆိုက်များ (2020) - အဘယ်သူမျှမ Sign Up & Download လုပ်ပါ - ဖျော်ဖြေရေး
အခမဲ့ရုပ်ရှင်များလွှင့်ထုတ်လွှင့်သည့်ဆိုဒ်များ (၂၀၂၀) သည်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းမပါပဲ
သင်ကဲ့သို့ Cinephile သည် bandwidth အကန့်အသတ်နှင့်သာစဉ်းစားသောရုပ်ရှင်များကိုကြည့်လိုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် Cinephiles လူငယ်များသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုတွင်စာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်ငွေကြေးစီစဉ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဒီအခက်အခဲတွေကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် streaming ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်မတို့စုဆောင်းထားပါတယ်။
အခမဲ့ Movie Streaming ဆိုဒ်များ - Online Movies များကိုကြည့်ခြင်း
ပြင်ပ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှကာကွယ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူ“ အခမဲ့ရုပ်ရှင်များ” အွန်လိုင်းစာရင်းကိုဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင်ဤဆိုဒ်များသည်အသုံးပြုသူများအတွက်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ကိုအာမခံသည်။
အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်များကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များစာရင်းတွင် Crackle သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံး ဦး စားပေးမှုဖြစ်သည်။ Crackle ကို Sony Pictures ကပိုင်ဆိုင်သည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်ရုပ်ရှင်ကားများ၊ နောက်ဆုံးပေါ်တီဗီစီးရီးများစွာကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားနိုင်ပြီးလာမည့် blockbusters များနှင့် ပတ်သက်၍“ Incoming Notifications” ကိုရွေးချယ်လိုလျှင်၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်။ Crackle သည်အသုံးပြုသူများကိုသင်၏မော်နီတာနှင့်မျက်နှာပြင်မည်သည့်အတိုင်းအတာတွင်မဆိုအံ့သြဖွယ်ကောင်း။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်အချို့ကိုကြည့်ရှုခွင့်ပြုသည်။
Crackle တွင်သုံးစွဲသူများကြည့်ရှုနိုင်သည့်ရုပ်ရှင်များ -Resident Evil၊ Groundhog Day၊ Iceman၊ တတိယမြောက်မျိုးနွယ်၊ Shutter Island, Zodiac၊ Ryan, Boogeyman, Resident Evil နှင့်အခြားသူများအားကယ်တင်ခြင်း။ ဒါကြောင့်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအခမဲ့ရုပ်ရှင် streaming site များရွေးချယ်ရန်သင်၏ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုထိပ်မှာထားနိုင်သည်။
Crackle သည်ထိရောက်သောမိုဘိုင်းဖုန်း application တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိပ်တန်းအဆင့်နှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များကို Crackle တွင်ရရှိနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများသည်လူကြိုက်များမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရုပ်ရှင်များကိုမစီစဉ်နိုင်ပါ။
Popcornflix သည်ကြည်နူးအားရဖွယ်ကောင်းသောအခမဲ့ online ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လွှင့်မှုများကိုကြွယ်ဝပြည့်စုံစေသည်။ မျက်နှာပြင်မီဒီယာလုပ်ငန်းများသည် Popcornflix ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤသည်သည်ထူးခြားသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပြီးဒရာမာ၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှု၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်မိသားစုစသည့်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုခြင်းတွင်အမျိုးအစားများစွာပါ ၀ င်ရန်သင်ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ကြားခံများအားအာမခံသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏ထူးခြားသောလက္ခဏာမှာအကောင့်ဖန်တီးရန်အတွက်ဝန်လေးရန်မလိုပါ၊ PLAY ခလုတ်ကို နှိပ်၍ Popcornflix တွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
Screen Media Ventures သည်အချိန်ပြည့်ရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
GIFs ကို screen မှစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
Film Buff သည်သင်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကစားနေစဉ်ရုပ်ရှင်၏အချို့သောအပိုင်းများကိုတုံ့ပြန်မှုပေးနိုင်သည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Yidio သည်အကောင်းဆုံးစိတ်ကြိုက်အခမဲ့ရုပ်ရှင်အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများကိုအွန်လိုင်းမှအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူစေသည်။ Yidio ကို“ Free Movie Search Engine” ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြောင်းကိုသိရန်သင့်အားကူညီသည်။
Yidio ရုပ်ရှင်များပေါ်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို R, G, PG-13 ကဲ့သို့သောအထင်ကရသင်္ကေတများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီတော့ Yidio မှာမင်းကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အမျိုးအစားကဘာလဲ။ ကာတွန်း၊ ဂီတ၊ အထူးစိတ် ၀ င်စားမှု၊ Indie၊ ရပ်ဆိုင်းမှု၊ ဂန္ထဝင်၊ အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်နှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီရုပ်ရှင်များ။
Yidio တွင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သောရုပ်ရှင်များ:Femme fatale, အပြာရောင်သည်အနွေးဆုံးအရောင်ဖြစ်သည်။ The Chase၊ Terminator၊ The Three, Dogateers နှင့်ရွှေကြက်ဥ၏အုပ်ထိန်းသူများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် Yidio သည်တစ်ချိန်တည်းတွင် Yidio သည်မင်းကဲ့သို့ cinephiles များအတွက်ကျယ်ပြန့်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့ရုပ်ရှင်ကားများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်လွှမ်းခြုံထားသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Yidio သည်မှားယွင်းသောနှင့်သွယ်ဝိုက်ဆက်သွယ်မှုအမြောက်အများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူများကိုမှားယွင်းစွာအနက်ဖွင့်သည်။
ခရမ်းချဉ်သီးရမှတ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ရုပ်ရှင်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
MPAA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အခြေခံ၍ ရုပ်ရှင်များကိုသင်စစ်ထုတ်နိုင်သည်။
YouTube တွင်ရုပ်ရှင်နှင့်အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခမဲ့အွန်လိုင်းလွှင့်ထုတ်ထားသောရုပ်ရှင်အမြောက်အမြားရှိသည် YouTube သည်ခွေးစကိတ်စီးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနောက်တွဲယာဉ်များနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲသင်အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်သောရုပ်ရှင်များနှင့်လည်းတိုးမြှင့်ထားသည်။
သို့သော်၊ အဓိကပြproblemနာမှာသင်သည် YouTube ၏အခမဲ့ online streaming ကဏ္sectionတွင်မည်သည့်ရုပ်ရှင်အသစ်ကိုမှရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ YouTube တွင်ရနိုင်သောရုပ်ရှင်များသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးယူကျုစစ်တမ်းတွင် Missing 411၊ Bob အမည်ရှိလမ်းပေါ်ရှိကြောင်တစ်ကောင်၊ Salvations, Devils winds နှင့်အခြားအရာများစသည်တို့ကို YouTube တွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
YouTube တစ်ခုလုံးကိုအခမဲ့ရုပ်ရှင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားရရှိနိုင်ဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်များစွာသောအားနည်းချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိနေသည်။
အချို့သောအခမဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်ရှင်များကိုပင် YouTube မှတည်ခင်းသည်။
နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်များကို YouTube တွင်မကြာခဏမရရှိနိုင်ပါ။
အခမဲ့ရုပ်ရှင်များတွင် HD အရည်အသွေးပြဗားရှင်းမရှိပါ။
Cinephiles သည် Snagfilms ဟုခေါ်သောမိမိတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းအခမဲ့ရုပ်ရှင်များကိုတွေ့ကြုံရန်နေရာအသစ်တစ်ခုရရှိထားသည်။ Snagfilms တွင်ရုပ်ရှင်၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည်။ Cinephiles သည်အကောင်းဆုံးအယ်ဒီတာ၏ရွေးချယ်မှု၊ အသုံးပြုသူရွေးချယ်သည့်အမျိုးအစားများနှင့် Snagfilms ကိုထူးခြားသောအခမဲ့ရုပ်ရှင် streaming ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အခြေခံသောရုပ်ရှင်အမြောက်အမြားကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
Snagfilms သည်မကြာသေးမီကသူတို့၏ရုပ်ရှင်စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးပါပြီ။ Snagfilms ၏ဗားရှင်းအသစ်တွင် Mr. Christmas ကဲ့သို့ကစားစရာများ၊ ကစားစရာများဖြစ်လိမ့်မည်၊ မက်ဒီယာ၊ စစ်ပြန်နှင့်စစ်တပ်တို့ပါဝင်သည်။
Snagfilms သည်အချိန်အတိအကျမရှိဘဲအမြင်များကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်ကျောင်းအပ်ခကိုပေးရမှာကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အချိန်ပြည့်ရုပ်ရှင်တစ်ချပ်ကိုပြတ်တောက်သွားစေမှာမဟုတ်ဘူး။
Snag ရုပ်ရှင်များသည်ကလေးများအတွက်ကောင်းမွန်ပြီးပညာပေးရုပ်ရှင်များကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းစံနှုန်းများကိုခွင့်ပြုသည်။ Snagfilms တွင် Facebook နှင့် Google ပေါင်းအကောင့်များမှဆိုင်းအင်ဝင်နိုင်သည်။
လူတို့သည် Vudu သည် cinephiles ၏ဘ ၀ တွင်ထူးခြားသောလုပ်ဆောင်မှုကိုသတိမပြုမိပါ။ Vudu ရှိကဏ္ different အမျိုးမျိုးတွင်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ထောင်ကျော်ရှိသည်။ Vudu တွင် 1080pixel ပါ ၀ င်သောအခမဲ့ရုပ်ရှင်များပါဝင်သောကြောင့်ရုပ်ရှင်စွဲသူများသည်သင်အခမဲ့ subscription ကိုရွေးချယ်နေလျှင်ပင်ရုပ်ရှင်၏ရုပ်ပုံအရည်အသွေးအပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောစရာမလိုပါ။
အခမဲ့ရုပ်ရှင်များကိုရွေးချယ်ရန် Vudu ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်ဤဖိုရမ်၌ရရှိနိုင်သည့်အခမဲ့ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုရန် Vudu ၏စာမျက်နှာအသစ်စာမျက်နှာသို့တိုက်ရိုက်သွားရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ခုများစွာသောရှိပါသည် အမျိုးအစားများ ကလေးများနှင့်မိသားစု၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ဟာသစသည်တို့ကိုအထူးသဖြင့်ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊
Vudu တွင်၊ သင်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ကိုရုပ်ရှင်ငှားရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ အခမဲ့သို့မဟုတ်ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုအကွက်တွင်ဖန်သားပြင်ပေါ်လာတိုင်း၎င်းကိုလျစ်လျူရှုနိုင်သည်။ သင် Vudu ကိုစာရင်းသွင်းလိုပါကရုပ်ရှင်များအတွက်ငွေပေးချေရန်ရွေးချယ်ပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
1080 HD မှာရုပ်ရှင်အရေအတွက်များစွာ။
Vudu ကရုပ်ရှင်တွေ ၀ ယ်ပြီးငှားလို့ရမယ်။
Roku ရုပ်သံလိုင်းသည်အခမဲ့အွန်လိုင်း streaming များကိုကြည့်ရှုရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။ Roku Channel ကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းထဲတွင်တပ်ဆင်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်လွယ်ကူစွာရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်းကိုပျော်ရွှင်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ Roku Channel သည်မင်းကဲ့သို့သော cinephiles များအားအကောင်းဆုံးဗြိတိန်ရုပ်မြင်သံကြား၊ Netflix ၏ထိပ်တန်းဖြစ်စဉ်များနှင့်အော်စကာဆုပေးရုပ်ရှင်များတွင်ကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်ရုံအချို့ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်များစွာသောရွေးချယ်စရာများကိုရရှိစေသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ရုပ်ရှင်တွေအကြားမှာစီးပွားဖြစ်ပြတ်တောက်တာတွေရှိပေမယ့်နောက်ကျတဲ့အချိန်ကို ၁၀ စက္ကန့်လောက်ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများသည် User Interface ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ပိုမိုထိုက်တန်သောရုပ်ရှင် streaming များ (Paid & Free)
1movies & အများကြီးပို .. !
Roku တီဗွီမှာကြည့်လို့ရမယ့်ရုပ်ရှင်တွေ - ခရစ္စမတ်၊ Hugo၊ တြိဂံ၊ August Rush ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ Memento, highlander ။ ယောက်ျားတွေ, ထခြုံ .. !! သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောရုပ်ရှင်ကိုအခမဲ့ရှာဖွေခြင်းတွင်ပြhavingနာများရှိပါက Red Box မှအသစ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်အားလုံးပါ ၀ င်သောငှားရမ်းခများ၌အခမဲ့ DVD များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပိတ်ထားသော Youtube ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနည်း။
PC ပေါ်တွင် Instagram DM - စာကိုမည်သို့စစ်ဆေး။ ပို့ရမည်နည်း။
TV Shows Online (၂၀၂၀) ကိုကြည့်ပါ။ အခမဲ့တီဗွီအစီအစဉ်များ
iPhone 12, Mini & Pro Max အတုကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။
သင်ကြိုးစားသင့်သောအခမဲ့ Beat ပြုလုပ်ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲများ
Voicemod Pro ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဤအရာသည်အသုံးပြုရန်လုံခြုံပါသလား။
အကောင်းဆုံး Android TV Box 2020 - ဖတ်ရှုရမည့်အချက်အလက်များ (သုံးသပ်ချက်များ)
Xbox One တွင် Discord အသုံးပြုနည်း။
Instagram Statistics & Facts (2020) - သင်သိသမျှသင်သိသမျှ
Apple Music ကျောင်းသားအထူးလျှော့စျေး (၂၀၂၀)
Roblox ကို Chromebook မှာဘယ်လိုကစားရမလဲ။
သငျသညျ Hulu တစ်ခု activation code ကိုဘယ်လိုရကြဘူး
ဂိမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံး android emulator
mp3 များစွာကို youtube မှ download လုပ်ပါ